Faraantiga Dumarka Geedkooda La galsho ee uurka Ka Hortaga (Vaginale ring) & dumarka Somaliyeed | GURIGA HAWEENKA
Home » Lamaanaha » Faraantiga Dumarka Geedkooda La galsho ee uurka Ka Hortaga (Vaginale ring) & dumarka Somaliyeed
Faraantiga Dumarka Geedkooda La galsho ee uurka Ka Hortaga (Vaginale ring) & dumarka Somaliyeed
Muxuu yahay? vaginale ring
Waa faraanti caag ah oo jilicsan lana galiyo siilka ama geedka dumarka (vaginale ring)oo cabirkiisuna yahay 54mm waxaana ku jiro 2 harmoono oola mid ah kan dumarka soo saaraan.
Qaabka uu wax u qabto
wuxuu u diidaa bacrimin ugxanta ayuu nasiyaa wuxuu adeeg kadhigaa afka minka wuuna badalaa maqaarka minka. Si kasta ha ahaatee adigoo faraantiga si sax u isticmaalayo ayuu wuxuu qabtaa inuu kaceliyo uur.
Marka kuu gu horeeyo oo faraantiga laguu galinaayo ha ahaato maalinka 1 waad ee caadada ku gu dhacdo = ga gaar degdeg ah.
hadii aad isticmaashid maalinka 2 baad ilaa 5 naad ee caadada isticmaal salbatiibo ilaa 7 maalmood.
Sadex isbuuc kadib, iska bixi faraantiga samee nasiino ilaa isbuuc ah taasoo intaas dhexdeeda kugu dhici doon to caadad. weli difaac waad leedahay inta aad nasiinada kujirto.
Hal isbuuc kadib, midkale gasho siilka isku maalin sida maalinkii aad bilaawday.
Marka kuugu horeeyo aad gashaneysid faraantiga arbacada ookale saacada 22h,
3 isbuuc kadib iska siib maalin arbaco ah saacaduna 22h.
Nasiino samee mudo 7 maalmood ah,kadib mid cusub gasho hadana maalin arbaco ah saacaduna tahay 22h.
Nasiinadu marnaba ma dhaafikarto7 maalmood.
Sida loo gashado iyo sida la isaga saaro
1. ku fidi faraantiga suulka iyo farta udhaxeyso.
2. Gali siilka dhexdiisa.
3. Hoos ugu riix iyo gadaal gadaal. Faraantiga markaas wuxuu joogi booskiisa. Hadii aad dareentid, hoos u sii riix ilaa meel dheer.
…aad dhiig baxdid 3 isbuuc oo aad faraantiga qabtid, ha iska siibin faraantuga wax dhib malahan hadii dhiigaas uu welisocdo kala hadal dhaqtarkaaga.
…aad qaadatid daawooyinkale sida antibiyootikada, kanjareeyska iyo kan dadka dejiyo. Ka hubso dhaqtarkaaga hadii aad weli kahor tag leedahay Sabab too ah daawooyinkaas waxay wax u dhimaan hortagaas. Si joogto ah u isticmaal faraantiga isticmaalna salbatiibo.
…aadan sameeyn wax galmood ah (hadii aad ninkaaga kala tagtaan, ama wax badan kala maqnaataan ) iskabixi faraantiga 3 isbuuc markey kuu dhamaato salbatiibana dhigo keyd ahaan.
…uusan dhiig kugu dhicin intii aad na siinada kujirtay wax qaladna uusan dhicin xaga isticmaalka ama xaga daawada,gasho mid cusub waxtigii loogu talagalay una sheeg dhaqtarkaaga ama qorshaha qoyska.
Hadii aad iloowdid inaad iska bixisid ama gashatid faraantiga
Hadii aad iloowdid 3 da isbuuc kadib inaad iska bixisid = ciyoow iska saar isla markiiba gasho midkale hana ahaado kii aad gashanlaheed maalinka kuwaad.
Hadii aad iloowdo mid cusub inaad gashatid aadna ahaatid faraanti la aan hal isbuuc = gasho faraanti kale islamarkiiba.
Salbatiibo isticmaal 7 maalmood
Haddi ad galma gashay 7 ciisho ee la so dafay, waxad la xirirta hayada qabilsan cafimadka galmada iyo qoysyada ama daqtarkaga. Waxa laga yaba in ad uu bahan tahay ka hortag ur kama ah. Taasna waxa lo bahan yahay si deg deg ah in loga hortago – marba sida wax ay yihin ugu dambeen 70 ama ila 120 sacad ka dib markad galmada sameesay bila ka hortag ur (waxad eegta ka hortag ur kama ah).
Hadii si shil ah faraantiga kaaga soobaxo maxaad sameyneysaa?
Biyo raaci faraantiga biyo qaboow ama qandac (marnaba ha isticmaalin biyo kulul) ee dib ugasho siilka ama iska badal.
Hadii faraantiga uu siilka banaankiisa yaalay mudo 3 saacadood kayar, wax tarkiisii weli wuu leeyahay.
Hadiise uu banaanka joogay 3 saac in kabadan, wax tarkiisa lama hubo:
Faraantiga ku cesho isticmaalna salbatiibo ilaa 7 maalmood.
Hadii aan ku jirno
Isbuucii koowaad ood gashatay faraantiga: Isticmaal salbatiibo ilaa 7 maalmood weydiisana kahortag deg deg ah hadii ay galmo dhacday, (xitaa hadii ay tahay xiliga nasiinada).
Isbuuca 2baad: Isticmaal salbatiibo 7 maalmood sida caadiga aheydna ku wad.
Isbuuca 3xaad: Isticmaal salbatiibo 7 maalmood ee marka ugu danbeyso si dhaqso leh ugasho mid cusb ilaa 3dex isbuuc (nasiino ha sameeyn).
Caadadana dib ayay u dhici doontaa faraantiga 2aad kadib.
Sida xaalad kasta oo kahortag ah,waxaa lagula talinaayaa salbatiibo inaad ula isticmaashid si eey u difaacdo cudurada laga qaado galmada sida aydhiska iyo infakshinka.
2015, SANTÉ SEXUELLE Suisse, Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive; Artcoss, association romande et tessinoise des conseillères et conseillers en santé sexuelle, faseg, Fachverband sexuelle Gesundheit in Beratung und Bildung
(Somalisch / somali / Afsoomaali – Der Vaginalring / L’anneau vaginal)
Previous: Kaniiniga ka hortaga uurka
Next: Nin Jaceyl dartiis baaskiil ugu socdaalay Qaarada Aasiya ilaa Yurub!! (SAWIRRO)